Beesha Caalamka oo ku guuleysatay arrin muhiim ah | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha Caalamka oo ku guuleysatay arrin muhiim ah
Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa ku guuleystay arrin muhiim ah oo uu hore ugu fashilamay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wakiillada Beesha caalamka ayaa ku guuleystay in ay magaalada Muqdishu isugu keenaan Madaxda Dowladda Fadaraalka, kuwa Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, taas oo uu awoodi waayay Madaxweynaha aaan shaciyadda heysan Farmaajo.
Kadib markii qaar ka mid ah madaxda Dowld gobolledyada ay si cad u diideen, baaq uu dhowr jeer soo saary Farmaajo, ayay wakiillada Beesha Caalamka qaateen masuuliyadda saaran, waxa ayna ugu horreyn ku guuleysteen in ay Muqdisho ka soo dajiyaan, Madax-weynayaasha Puntland iyo Jubbaland, Siciid Deni iyo Axmed Madoobe, oo si weyn kaga aragti duwan Farmaajo.
Mar kale, Wakiillada Besha Caalamka waxa ay ku guuleysteen in ay dalka dib ugu soo celiyaan Madax-weynayaasha Galmudug iyo Koofur galbeed, Axmed Qoor-qoor iyo Cabdicasiis Lafta-gareen, oo qorshe lagu dajiyay Madaxtooyada Soomaaliya dhowr todobaada ku deganaa dalka Turkiga.
Waraysi uu dhawaan bixiyay Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Christopher Swan, ayaa sheegay in shirku uu ka dhici doono, teendhada Afisyooni oo ku taalla goob amaan ah, Beehsa Caalam-kuna bixinayaan qarashka ku baxaya xubnaha ka qeyb galaya wada-tashiga, isla markaana ay damaanad qaadayaan fulinta wixii lagu heshiiyo.
Dhamaan dhinacyada lagama maarmanka u ah shirka wada tashiga qaran ayaa hadda ku sugan Muqdisho, waxaana la filayaa in maanta ilaa caawa ay caasimaddu marti galiso kulamo gaar gaar ah oo horu dhac u ah shirka weyn ee soo socda.